अन्तिम दुई हरफ राम्रो लागेन ( मलाई राम्रो लागेन भनेको नि पाठक को अधिकार ले :) ) अन्य हरफ हरु सबै धेरै राम्रो लाग्यो । शब्द च् यन मा त य हा माहिर हुनुहुदो रहेछ ! माने बा ! कत्ती मिलाएर लेख्नु भएको हो भन्या ! हिर्दय छुन्छन है तपाईंको गजल ले । निरन्तर पढ्न पाइ रहु ! शुभ कामना हिर्दय देखी नै ।